Kinky na-enweghị nsogbu - Afrikhepri Fondation
Wenezdee, Septemba 23, 2020
min gụọ 5 min
Dị ọhụrụ na ọbaakwụkwọ anyị! Kinky enweghị nsogbu. N'ikpeazụ akwụkwọ na French banyere mmezi nke ntutu nwere oke okike. Kinky na Re-Belle! na-akpọ gị òkù ka ị chọpụta onye edemede na akwụkwọ ya site na mkparịta ụka dị mkpirikpi.
BRC! : Akwụkwọ, nwa agbọghọ ... Miss Grain of Pepper, who are you?
Miss Grain de Poivre: Oge ikpeazụ m mere ka ntutu m gbasaa bụ na 1998. N'oge na-adịghị anya, ntutu m malitere itisa. Ọ mara oke mma ma na-enwe nkụda mmụọ. N'afọ ahụ, ekpebiri m na agaghị m agbatị ntutu m, ọkachasị ebe ọ bụ na ọ bụghị nke mbụ ụdị dishap a mere m. Ọ dịrịghị m mfe imezu nkwa m. Emere m onwe m buns, akwa, vanilla, pometail, nnukwu ibu abụọ.
O doro anya, mgbe ụfọdụ enwere m agụụ oke ịgbaso ejiji, ka m nwee ntutu nke m hụrụ na akwụkwọ akụkọ, na TV. Ewezuga oge kachasị, ndị a bụ edozi isi maka ntutu ntutu Caucasian, ya mere abụghị nke m.
N'ihe dị ka afọ atọ gara aga, amalitere m ịfụ ụgbụ iji hụ ma enwere saịtị ndị raara onwe ha nye isiokwu ahụ mgbe ọ daa, site na amaghị m ohere ọ bụla, na mmemme "njikọ Bworld" raara nye Juliette Smeralda, ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze, onye dere akwụkwọ dị ịtụnanya. A kpaliri isi okwu nke akwụkwọ Frantz Fanon, "Akpukpo ojii, nkpuchi ọcha" nke ghọrọ "akpukpo isi, ntutu dị omimi, akụkọ banyere mwepụ". Ọ bụ ụdị mkpughe, nghọta. Staynọgide na-enwe okike iji zere iji ngwaahịa ngwaahịa na-emebi emebi ntutu m nwere nzube ọzọ. Ọ bụ ịnakwere m dịka m na-enweghị ịnwa ịgbanwe onwe m na onye ọzọ.
Achọpụtara m na ndị enyi m, nwanne m nwanyị, ụmụ nwanne nna m, ụmụ nwanyị, ụmụ agbọghọ, obere ụmụ nwanyị nwere agba n'okporo ámá, ụzọ ụgbọ oloko. Achọpụtara m ọnọdụ ọnọdụ isi ha, ntutu ha, ntutu ha, mgbatị ha, m wee jụọ onwe m ajụjụ gbasara etu ha si ahụ onwe ha. Ọ bụrụ na mbụ, mmadụ na-enwe wig mgbe mmadụ butere kansa ọrịa kansa. Agbanyeghị, ruo ọtụtụ ọgbọ nke ụmụ nwanyị, ịkpụ ntutu isi ha ma ọ bụ ịgbanwe ya abụrụla ebe a ma ama na akara nke ịma mma.
Achọkwara m akwụkwọ maka etu m ga-esi lekọta ntutu isi ya dị nkọ. Ọ na-amasị m ịgụ ihe. Ana m azụta akwụkwọ ma na-agakarị n'ọbá akwụkwọ. Yabụ, achọrọ m akwụkwọ n'asụsụ French nke nwere ike inyere m aka ịbịakwute m, nye m echiche, ndụmọdụ, aghụghọ. Ahụghị m nke ọ bụla. N'aka nke ọzọ, achọpụtara m ọtụtụ saịtị na blọọgụ jupụtara na ndụmọdụ.
Nke nta nke nta, enwere m echiche idere onwe m ọrụ m na-achọ. Echiche a, ana m ahapụ ya ito, na-ahapụ ya mgbe ụfọdụ site na ịgwa onwe m na agaghị m aga n’ihu, na ọ baghị uru ọ bụla, na ọ gaghị enwe mmasị n’ebe onye ọ bụla nọ ebe ọ bụ na o nwere ozi n’efu na ụgbụ ahụ. . Ma emesia, n'ikpeazu, amaara m nke ọma nke ọma mgbe m batara ya na mma, n'ihe na-erughị otu ọnwa, amụrụ obere ọrụ m. Edozigharịrị m ya na ihe ahụ, kama iziga ya na nchịkọta akụkọ na-ejighi n'aka na edochiri ya, ekpebiri m ịga ebe a chọrọ ihe ntanetị site na saịtị Lulu.com.
Usoro a gụnyere, dị ka ọ dị, na nbudata ọrụ ya na saịtị ahụ nke na-eme ka ọ dịrị na arịrịọ nke ndị na-agụ akwụkwọ nwere mmasị. Uru ọ bara bụ na nwebisiinka dị mkpa karịa maka mbipụta ọhụụ. Enweghị ngwaahịa ya mere ụgwọ ọrụ mbipụta akwụkwọ tupu oge eruo. Na mgbada bụ ọnụahịa nke akwụkwọ. E nyeghị euro 20. Ama m ya. Mana cheta m ego ole ị tinyela na ngwaahịa ọrụ ebube iji chekwaa ntutu gị? lol
Ahọrọ m iji pseudonym Miss Grain de Poivre ke ụtụ maka obere grains dakọtara na-etolite ntutu mgbe ọ na-adị frizzy.
BRC! : Otu ajụjụ na-agba m egbugbere ọnụ: gịnị bụ ihe nzuzo gị iji nweta ntutu dị mma na ogologo?
Miss Grain de Poivre: Echere m na ọ dị mma icheta na obere anyị na-ejikwa ntutu anyị dị nkọ, obere anyị na-ejikwa ya na ịgbatị, edozi isi, ị ga-amachibido ya n'okpuru akwa, ụdị, wigs, ka mma. ha na-eto. Ọ bụ naanị nzuzo. Mgbe ahụ, ogologo ntutu anyị ga-eru ogologo ka edere na mkpụrụ ndụ ihe nketa anyị. Echeghị m na m ga-enwerịrị ha ogologo oge otu ụbọchị mana ọ dịla ogologo n'ogo, echere m. Tokwesiri inwe ndidi, mara ntutu gị ma chọpụta ihe na-eme ka obi dị ha mma. N’adịghị ka ntutu kwụ ọtọ, ọ na-eto site na ịgbanye onwe ya na ọ nwere ike iyi na ọ naghị eto ebe ọ bụ na anyị na-ezo aka na ntutu isi Barbie. N'ezie, ha na-eto nwayọ karịa ntutu nke Caucasian, mana tụkwasịrị m obi, ha na-eto. Maka ndekọ ahụ, ụdị ntutu nke Africa na-eto site na +/- 0.8 cm kwa ọnwa, ụdị nke Europe site na +/- 1 cm kwa ọnwa yana ụdị Asia site na +/- 1.5 cm kwa ọnwa. Nweta ndị na-agụ ha! Chegodi na kemgbe ị bụ nwata, a kuziri gị ka ị hụ ntutu gị n'anya, ịkwanyere ya ùgwù ma lekọta ya karịa ịkọwa ya, kedu ka ọ ga-adị ugbu a?
Banyere usoro ntutu m n'oge a, enwere m vanilla na ntutu m ma ekweta na anaghị m elekọta ha nke ọma. Ejiri m shampoo Organic. M na-agba mbọ ịhapụ itinye nke ukwuu ma ọkachasị ntutu m mmiri nke ọma iji wepu nsị nke ọ bụla. Etinyekwara m akwa nhicha n'isi m ruo mgbe mmiri buru ibu na-a absorụ mmiri ahụ wee hapụ ya ka ọ kpọọ nkụ. Ihe na-atọ ọchị bụ na vanilla m mebiri emebi (nke a na-ama ama, ihe dị ukwuu nke ntutu isi anyị) ozugbo nkụ nakwa na ka m na-ehi ụra, n'echi ya, ha na-ahụ ogologo. Ma ọ bụghị ya, maka ọnwa ole na ole, echere m na achọtala m, mgbe m nyochasịrị ọtụtụ, ngwaahịa dabara na m nke ọma, butter shea butter nke na-eme ka ha gbanwee. Ka ntutu m na-etowanye, ọ dị gịrịgịrị, ma ọ bụghị n'echiche na-ezighi ezi. Ọ nwere ike metụtara ya na oke, ibu, amaghị m, akụkọ dị omimi banyere ike ndọda.
M na-akpọ gị òkù, ka ị chọpụta ọrụ m, "Frizzy enweghị nsogbu", raara nye ndị niile chọrọ ma bụrụ ndị ka na-ala azụ ịbanye n'okporo ụzọ na ụmụ nwanyị niile na-emebu ntutu isi ha nke enweghị. buru ụzọ.
Site na Mkpụrụ ọka na-acha odo odo
NA-EKWU OKWU INWETA, obere nduzi dị mkpa iji lekọta ntutu gị nwere ntutu dị mma
9,50€ dị na ngwaahịa
2 dị ọhụrụ site na 9,50 €
Zụta € 9,50
nke September 23, 2020 12:13 pm
Ụbọchị mwepụta 2017-02-25T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2017-02-25T00:00:01Z
Akụkọ banyere Shaka Zulu (1786-1828) na ọmụmụ nke ndị Zulu